Madaxweyne Xasan: Howlgalka Badweynta Hindiya ayaa dhawaan bilaabanaya – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mreeg.com: Madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa sheegay in howlgal milatari oo ka dhan ah Al-Shabaab uu dhawaan billaaban doono si looga saaro ururkaas goobaha u weli gacanta ku hayo.
Wareysi uu madaxweynuhu siiyay wakaaladda wararka ee Reuters isagoo ku sugan magaalada Washington ee dalka Mareykanka ayuu ku sheegay in dowladdiisu ay qaadayso guluf colaadeed oo ka dhan ah A-shabaab.
“Qorshaheennu waa inaan billowno maalmaha soo socda colaad ka dhan ah Al-shabaab,” ayuu yiri madaxweynaha oo intaas ku daray. “Waxaan rajeynaa in howlgalladaas ay noqon doonaan kuwo aan ku guuleysanno.”
Madaxweynaha ayaa xusay in “Howlgalka Badweynta India” uu billaaban doono maalmaha soo socda, isagoo intaas ku daray in dhammaan waxyaabihii howgalka looga baahnaa ay diyaar yihiin.
Wuxuu gaashaanka u daruuray in weerarradii dhawaan ka dhacay Muqdisho ay muujinayeen in Al-Shabaab ay xoogeysaneyso, isagoo tilmaamay in ay lamid ahaayeen weerarradii ay maleeshiyadu ka geysatay dalalka deriska ah sida kii Westgate ee sannadkii hore.
”Tani waa calaamad daciifnimo, goobaha ay Al-Shabaab heystaan hoos ayey u sii dhacayaan, waxayna beddelayaan xeeladooda’’, ayuu yiri madaxweyne Xasan Sheekh.
Madaxweyne Soomaaliya ayaa sheegay in uu ku kalsoon yahay ammaankiisa kaddib isku dayo ay Alshabaab weerartay dhowr jeer.
”Al-Shabaab waxay isku dayeen in ay aniga meesha iga saaraan iyo hoggaanka dalkaba, laakiin kuma aysan guuleysan taas, kumana guuleysan doonaan mustaqbalka’’, ayuu mar kale ku yiri wareysiga lala yeeshay.
Howlgalkii horay u socday ee ciidamada Soomaaliya iyo Amisom ku beegsanayeen degmooyinka Alshabaab maamulaan ayaa dhowr bilood ka hor hakad galay, iyadoo Alshabaab laga saaray ilaa 9 degmo.